High Speed Spiral Door China Manufacturers & Suppliers & Factory
High Speed Spiral Door - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka High Speed Spiral Door)
2018 High Speed ​​spiral Doors Building Material
Ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ mmepe a na-ejikarị eme ihe maka ebe a na-ebugharị ebe niile na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. E jiri ya rụọ okporo ụzọ, a ga-arụnye ọnụ ụzọ a na-emeghe oghere. Ha na-enye okpomọkụ na mkpuchi mkpuchi ya na usoro ihe owuwu ya. A na-emepụta panel na-esi n'èzí site na 0,5mm, akwa mkpuchi zinc dị elu na BS EN...
Ngwongwo nke Aluminom Kpamkpam Righarita Uzo Shenzhen Hongfa Automatic Co, .Ltd bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke na-etinye aka na mmepe nke ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ na-emepe nke ụwa . N'ime ihe karịrị afọ iri na atọ na ahụmahụ ndị a, a na-ebupụ ngwaahịa Blueprint akwa ngwaahịa na mba 40. Ngwurugwu nke a na-eme ka ọ dị ala...
Aluminom elu ọsọ agbagọ ụzọ
Aluminom elu ọsọ agbagọ ụzọ Ibu ibu di ike. n'otu ebe dị elu na-aga n'ihu, ọkụ ọkụ nwere ike ịrụ ọrụ karịa 1000 ugboro n'ụbọchị. Ọsọ ọsọ nke oghe nwere ike ruo 2.5m / s, na-etinye aka n'igwe ọdụ ụgbọelu dị elu Product
nnukwu ala ala ala na-emechi ụzọ
nnukwu ala ala ala na-emechi ụzọ Ịgba ọsọ ọsọ, nchekwa na amart nwere ike ịhazi gị site na gị chọrọ.Obudata dị ike. n'otu ebe dị elu na-aga n'ihu, ọkụ nwere ike ịrụ ọrụ karịa 1000 ugboro
Eji ọrụ mmanye dị maka ngwa buru ibu nke nwere ike itinye ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ na-ahụ maka ọrụ iji kwado ihe niile chọrọ. A na-emepụta panel na-esi n'èzí site na 0,5mm, akwa mkpuchi zinc dị elu na BS EN 10147 A na-eji ọnụ ụzọ dị elu karịa ebe a na-ebugharị ebe niile na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma jiri aka na-agagharị, a...
Metal agbatị ike aluminum elu ọsọ ọnụ ụzọ
Ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ mmepụta ihe bụ ụzọ kachasị dịgide adịgide na nke kachasị adịgide adịgide iji hụ na a na-ekesa n'akụkụ ebe ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụzọ nbata nke ngwongwo, ibufe na ibudata ebe. A na-akpụ akụkụ ahụ nke ọkpụkpụ site na ntụpọ sandwich 40 mm. Ogwe ndị a na-enye mkpuchi okpomọkụ na okpomọkụ n'ihi na a...
High Speed Spiral Door High Speed Door High Speed Security Industrial Door High Speed Door Motor Spiral High Speed Door Aluminum High Speed Door OCM High Speed ​​Door PVC High Speed ​​Rolled Door